“Mpanao Ady Totohondry Be Fangorahana” Ao Japana Nanome Fiofanana Sy Fanantenana Hoan’ireo Mpanao Ady Totohondry Madinika Filipiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2015 12:41 GMT
Taorian'ny fihaonana tamin'ireo mpilalao ady totohondry mitolona [amin'ny fiainana] sasantsasany avy ao Filipina, nangoraka tamin'ny fepetra iainan'izy ireo i Eiji Yoshikawa ary nanapa-kevitra hanome azy ireo fanazaratena matihanina. Saingy ankoatra ny fizarana ny fahaizany manokana, nangataka tamin'ireo namany sasany sy ireo Japoney mpilalao ady totohondry hafa ihany koa izy mba hanome fanohanana fanazarana sy fanohanana ara-bola ho an'ny fianakavian'ireo Filipianina mpilalao ady totohondry. Toarian'ny roa taona, nahomby ny fanazarantena nataon'i Eiji mpilalao ady totohondry roa izay nandray anjara tamin'ny fifaninanam-pirenena.
Ny zavatra niainan'i Eiji amin'ny fanomezana fanazarantena ho an'ireo Filipianina mpilalao ady totohondry sy ny iraka ataony manaitra amin'ny fahantrana ao Filipina no lohahevitry ny horonantsary fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe ‘Tabataba any anaty ala’ . Jereo ny sombintsombin’ny horonantsary eto ambany:
Malaza ao Filipina ny ady totohondry ary maro ireo tanora no maniry ny hanara-dia ilay tompon-dakan'ny ady totohondry Manny Pacquiao. Saingy tsy ny rehetra no ho lasa Pacquiao ary an-jatony, raha tsy an'arivony ireo mpankafy ady totohondry mbola mijanona ho mahantra sy tsy mahazo fanazarantena sahaza. Soa ihany fa misy ireo ‘mpilalao ady totohondry matihanina be fangorahana’ tahaka an'i Eiji izay tsy manasongadina ny fahantran'ny mpilalao ady totohondry ihany fa manainga ihany koa ireo olona ao Japana sy Filipina hanome fanampiana ireo mpanao fanatanjahantena sy ny fianakaviany.
18 ora izayKambodza